Real Madrid Oo Dib Ugu Soo Laabatay Saxiixa Paul Pogba Oo Ka Tirsan Manchester United
HomeSuuqa kala iibsigaReal Madrid oo dib ugu soo laabatay saxiixa Paul Pogba oo ka tirsan Manchester United
October 13, 2021 Suuqa kala iibsiga, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Real Madrid ayaa dib ugu soo laabanaysa saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Man United ee Paul Pogba sida lagu sheegay warbixintii ugu danbeesay.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France ayaa muddo dheer loo arkayay bartilmaameedka koowaad ee kooxda La Liga intii uu Zinedine Zidane hogaaminayay kooxda.
Xiisahaas ayaa tan iyo markaas yaraaday, iyadoo Paris Saint-Germain iyo kooxdiisii ​​hore ee Juventus loo tixgeliyey meesha ugu dhow ee 28-jirkan uu aadi doono.
Si kastaba ha ahaatee, AS ayaa soo jeedineysa in Madrid ay ka dhawaajisay Pogba dhowr isbuuc isla markaana ay qeyb weyn ka tahay loolanka loogu jiro hanashada xidigan.
Wargeyska Isbaanishka ayaa intaas ku daraya in Los Blancos ay rajeyneyso in saxiixa Pogba uu sidoo kale sii qancin karo ninka ay dhalashada wadaagaan ee Kylian Mbappe si uu ugala soo saxiixdo PSG xagaaga soo aadan.
Pogba ayaa qandaraaskiisu ka dhacayaa Old Trafford dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana ay u muuqataa mid aan u badneyn inuu qalinka ku duugo heshiisyo cusub.